အစွဲအလန်းများ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
:) ဆင်ဖိုနီအိပ်မက် ဆိုတဲ့ စီဒီဓါတ်ပြားကလေးကို သိပ်ကြိူက်ပြီး ဆရာမြို့မ ငြိမ်းအကြောင်း ၊ သီချင်းတွေအကြောင်းကို ပြုံးပြုံးကြီးပြောရင်း လက်တဖက်မှာ ဆေးလိပ်တို တဖက်မှာ မီးခြစ် ကို ဆဆ ကိုင်လို့ သင်ဖြူးဖျာပေါ်မှာ ပုံ့ပုံ့ကြီး ခြေဆန့်ထိုင်ရင်း သီချင်းတွေ ဆိုပြလိုက် အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောပြလိုက် နဲ့..........။
ဘိလပ်က ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ South Hall က ဗမာမိတ်ဆွေတွေအိမ်ကို သွား ခဲ့ရင်း ဒက္ခိဏရိပ်သာ လို့ South Hall ကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး ကို ပြန် လွမ်းမိတယ်ဗျာ။
ကလေးတယောက်လို အပြစ်ကင်းတဲ့ ဆရာကြီး..
လာဖတ်သွားတယ် အစ်မ၊ ဆရာကြီးရဲ့ နာမည်ပေးပုံလေးတွေ သဘောကျလိုက်တာ
အမရယ် ... ဆရာကြီး မြန်မာမှုပြတဲ့ အမည်လေး တွေကို ဖတ်ရတာ မျက်ရည်တောင် ဝိုင်းတယ်ဗျာ..
ကြည်လဲ ကြည်နှုး..လွမ်းလဲ လွမ်းတာမျိုးဗျ...
အမချိုသင်းဖေဖေက မြန်မာမှုပြုတာ လေးစားစရာကောင်းတယ်နော်။ နိနိအဖေကလည်း အစွဲအလန်းလေးတွေ ရှိတယ်ဗျ။ သူဝတ်နေကျ ပုဆိုး၊ သူကြိုက်တာဆို မှတ်ထားတာ။ တနေရာသွားမယ်ဆို တခြားဟာဝတ်ခိုင်းလို့ မရဘူး။
နိနိလည်း အစွဲအလန်းကြီးတယ်ဗျ။ စာမေးပွဲဖြေရင် အဖြုအကျီင်္လေးဝတ်ရမှ စိတ်ကြည်တယ်ထင်တာ။
ကျွန်တော်တို့လဲ စင်ကာပူက Red Hill ကို မြေနီကုန်း လို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ ဆရာထိုင်နေကျ "နားခိုရာ" လဖက်ရည်ဆိုင် ကိုကော အဲဒီမှာ နာမည် ပေးမသွားဘူးလား။
မြေနီကုန်း၊နှင်းဆီကုန်းနဲ့ ရေကြည်အိုင်ကို ဆရာကြီး မြန်မာမှူပြုထားတာကိုသဘောကျတယ်
ကျွန်တော့်အဖေကတော့ သူ့အင်္ကျီ၊ ပုဆိုးတွေကို တစ်ခါလောက်ယူဝတ်သွားမိရင် ဘယ်တော့မှ ပြန်မဝတ်တော့ဘူး။ အစွဲလမ်းကြီးတယ်ပဲ ပြောရမလား
ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အဖေ့အင်္ကျီ၊ ပုဆိုးတွေဆို သူမြင်အောင်ကို တမင်ယူဝတ်ပြလိုက်တယ်။ ဟီး ဟီး။
စာလာဖတ်သွားပါတယ် အမရေ.. :)
အစွဲအလန်း က လူတိုင်းပါပဲ..။
မြတ်နိုးဆို ချယ်ရီတွေဝေနေချိန်ဆို ပိတောက်တွေကို မြင်နေတာ...။
အစွဲအလန်း ဆိုတာထက်၊ အမိမြေကို တမ်းတမ်းတတလွမ်းဆွတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ၊မြန်မာရနံ့လေးတွေ တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ့် ၀န်းကျင်မှာရှင်သန် နေအောင်၊ လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာပြည် ကိုစွဲစွဲလန်းလန်း ကို ချစ်တဲ့ မျိုးချစ် စိတ်အစစ် လို့ မြင်မိ တယ်။
ဟုတ်တယ် ချိုသင်းရေ ဒို့ ကတော့လူစည်တဲ့မြို့ လည်ကို
လည်းတန်း လို့ ခဏခဏယောင်ပြီးပြောမိတာ။ နာမည်ကတခြားကြီးပါ။
ချိုသင်းရေ.. သတိရစရာတိုးရပြန်ပြီ။ ဇင်းမယ်လာတုန်းကလည်း ဗမာထမင်းဆိုင်ရှေ့က နီမာဟေမင်လမ်းကို ဟေမာနေ၀င်းလမ်းတဲ့..။ စွဲကျန်ခဲ့ရော...။
MCT: တို.ကတော.ဖြစ်သလိုချက်တာတွေကို နံမည်ပေးထားတယ်။ တူဒေးစပါယ်ရှယ် တဲ။့ ဒါပေမဲ့ ချက်တာ ကတော. ပုဇွန်ကြော်နဲ့ မုန်လာဥ ချဉ်ရည်ဟင်းဘဲ။ ချက်ပြီဆိုရင် ဒါဘဲ. ဘာဟင်းလဲ လာ မမေးနဲ့။
ဆရာကြီးရဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းကြီးနဲ့...ဆေးလိပ်တို လက်ကြားအမြဲညှပ်တတ်တဲ့...လက်တုတ်တုတ်ကြီးကို သတိရသွားမိတယ်...... အမြဲပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာကလဲ.... အမှတ်ရစရာ..လွမ်းစရာပဲ.....လပိုင်းလောက်ပဲ ခဏတွေ့လိုက်ရပေမဲ့.လည်းးးးးးးးးးးးးးး
သမီးလည်း စာဖတ်နေရင်းက နားခေါင်းလေး တရှုံ့ ရှုံ့ နဲ့ ကလေးလေးကို သတိရနေတယ်
သမီးရေးတာက နှာခေါင်းလေးနော် မှားသွားလို့
အမရေ ယမုံနာလမ်းက အ်ိမ်ကိုလာရင် နှင်းဆီကုန်းနဲ့ ရေကြည်အိုင်ကို လိုက်ပို့မှာလား။ :D
ဒီပို့စ်လေးလဲ ဖတ်မိပြီး သဘောကျလို့ ရေးလိုက်ပြန်ပြီ။
ကျွန်မလည်း အဲဒီလိုပဲ ဘာသာတွေပြန်ပြီး နာမည်ပေးလေ့ရှိတယ်။
Red House Road ကို အိမ်နီလမ်း၊ New Street ကို လမ်းသစ်၊ Oldbrook အရပ်ကို ချောင်းအိုလေး ရပ်ကွက်၊ Crown Hill ကို သရဖူတောင် ... စသဖြင့်ပေါ့။ အဲလိုမျိုး မှတ်ရမှ ပိုအားရသလိုပဲမို့ သူငယ်ချင်းတွေက ဟားကြတယ်။
ဒါလဲ အစွဲအလန်းပဲလား မသိပါဘူး အမရယ် ... ။
ဆရာကြီး ပေးတဲ့ မြန်မာနာမည်လေးတွေက နှစ်သက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။
yah our family also like seechet alot.Where is the location of shop u went to? When my next visit to ygn i want to eat there.
အား တော်တော် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ post လေး မမချိုရေ။
ပြီးတော့ အလမ္ဗရာ ကို သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူး ကျေးဇူး အထူးပါ။ "ကသစ်ပန်း" သီချင်း အစမှာ ပါတဲ့ အဲဒီ စာလုံးပေါင်းလေးကို သိချင်နေတာ ကြာပါပြီ